MyStop - Gaadiidka | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
My Stop waa codsi ku saleysan websaydh oo loo heli karo dhammaan waalidiinta Minnetonka ee ardaydoodu raacaan baska si ay uga helaan taleefannada casriga ah, kiniin ama kombuyuutar si ay u eegaan goobta basku hadda ku sugan yahay iyo waqtiga la qiyaasayo imaatinkiisa. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad aragto haddii waqtiga basku joogi doono joogsiga ilmahaaga. Waxaa ku shaqeeya ku gudbinta GPS-ka baska mid kasta illaa laba daqiiqo. Tan macnaheedu waa shaashaddaada ayaa cusbooneysiin doonta mid kasta illaa laba daqiiqo.
My Stop ma noqon doono mid firfircoon ilaa maalinta ugu horreysa ee dugsiga.
Tilmaamaha ku-meel-gaadhka ah ee joogsiga 'Versatrans My Stop log-in'
Soo gal adigoo adeegsanaya magacaaga MyMinnetonka SSO magacaaga iyo isgarad-sirta ah.
Xulo astaanta My Stop ee barnaamijyadaada aad heli karto.
Gal Versatrans My Stop adigoo u adeegsanaya Aqoonsigaaga Qoyska inuu yahay magacaaga magacaaga iyo magaca dambe ee dhammaan xarfaha waawayn sida lambarkaaga sirta ah. Fadlan ka dhaaf wax kasta oo gadaal ka sheeg ah eraygaaga sirta ah.
Waxaad ku heli kartaa Aqoonsigaaga Qoyska adiga oo saxiixaya Skyward Family Access oo aad doorataa "Macluumaadka Ardayga".
Markaad gasho Skyward, u gudub Macluumaadka Ardayga ee ku yaal safka bidix ka dibna xulo si aad u aragto isku xirka qoyska "Magaca Ardayga".
Bogga qoyska waxaad ka heli doontaa Aqoonsigaaga Qoyska dhinaca midig.
Markaad gasho My Stop waxaad arki doontaa khariidad. Haddii dariiqa uu firfircoon yahay waxaad ku arki doontaa khariidadda saddexagal huruud ah oo tilmaamaya meesha basku yaal.
Haddii aad leedahay carruur badan waxaad beddeli kartaa marinka baska adoo ka dooranaya ilmahaaga liiska hoos u dhaca ee geeska bidix ee kore.
Qeybta hoose ee bogga waxaad ka ogaan doontaa lambarka baska iyo waqtiga la qiyaasay ee imaatinka.
Ha galin Meesha aan istaago kahor 10 daqiiqo kahor jadwalka qaadashada ama ka tagida ilmahaaga. Xogta lagu bixiyo My Stop ayaa si joogto ah isu beddelaysa. Waqtiyada la qiyaasayo ee imaanshahu waxay ku saleysan yihiin xisaabinta wadada GPS-ka ee caadiga ah, mana aha waqtiga saxda ah ee harsan si loo gaaro joogsiga baska ilmahaaga. Waxaad marin u heli doontaa xogta ugu saxsan haddii aad nidaamka ku hubiso 10 daqiiqo gudahood laga bilaabo waqtiga jadwalka cunugaaga la qaadayo ama la tagayo.
Haddii aad hawlgelisay My Stop oo aad su'aalo qabtid, fadlan fiiri hagaha "dhibka".
Ilowday lambarka sirta ah
Waxaan ku arkaa fariinta soo socota My Stop: Bas #XYZ ma shaqeynayo. Qiyaasta Waqtiga Imaanshaha: 3:54 PM.
Waxaan ku arkaa fariinta soo socota My Stop: Bus #XYZ is near MAIN ST. Qiyaasta Waqtiga Imaanshaha lama Heli Karo.
Waxaan ku arkaa fariinta soo socota My Stop: Bus #XYZ ma socdo wadadii loo qorsheeyay. Qiyaasta Waqtiga Imaanshaha: 3:54 PM.
Waxaan ku arkaa fariinta soo socota My Stop: Lama helin wadooyin firfircoon.
Tani waa farriinta soo muuqan doonta haddii baska ilmahaaga lagu beddelay bas kale oo aan ku qalabaysanayn qaybta GPS.
Haddii aad aragto farriintan, waqtiga lagu qiyaasay imaatinka waxay ku saleysan tahay jadwalka jadwalka iyo waqtiga ay dejisay Gaadiidka Ardayda, ee ma ahan waqtiga safarka ee harsan ee joogsiga baska ilmahaaga.
Macluumaadka dariiqa canuggaaga waxaa laga yaabaa inuu ku jiro howsha cusbooneysiinta. Sug daqiiqad wixii cusbooneysiin ah ee la dhammaystirayo. Kadib, haddii aad wali aragto farriintan oo waqtigan xaadirka ah uu ka dambeeyo waqtiga qaadista ama soo degitaanka ilmahaaga, basku waxaa laga yaabaa inuu ka gudbay joogsiga ilmahaaga.
Fadlan ogow: Wadayaasha basaska waxaa la farayaa inaysan ka hor marinin jadwalka subaxnimada. Haddii darawalku yimaado goobta laga qaadayo ka hor jadwalka, isaga / iyada waxaa la faray inuu ku sugo joogsiga illaa waqtiga jadwalka joogsiga.
Baska cunugaaga wali ma uusan bilaabin jidkiisa ama ma uusan dhameystirin marinkiisa. Haddii aad aragto farriintan, waqtiga lagu qiyaasay imaatinka waxay ku saleysan tahay jadwalka jadwalka iyo waqtiga ay dejisay Gaadiidka Ardayda, maahan waqtiga ay ku qaadaneyso basku inuu ka safro meesha uu joogo ilaa joogsiga baska ilmahaaga.
Haddii aad isku daydo inaad marin ku hesho My Stop goor hore, farriimo kala duwan oo is khilaafsan ayaa soo muuqan kara. Sababta fariimahani waxay u badan tahay maxaa yeelay basku wuxuu ku socdaa bilowga jidkiisa oo runti ma uusan bilaabin jidkiisii loo qorsheeyay.
Macluumaadka ugu saxsan, waxaan kugula talineynaa inaad sugto ilaa 10 daqiiqo ka hor inta uusan baska cunugaagu imaanin ka dibna mar kale hubi.